De blọgụ maka ụkwụ? Obi ebere na ahia | Martech Zone
De blọgụ maka ụkwụ? Charity na ahịa
Mọnde, Jenụwarị 4, 2010 Monday, November 24, 2014 Douglas Karr
Otu uru dị ukwuu nke ịde blọgụ, twitter na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ bụ na ha na-enye mmadụ ihu ahịa gị. Ndị mmadụ na-azụta ihe n’aka ndị mmadụ na ndị mmadụ na-azụta mmụọ, yabụ ndị mmadụ mmetụta dị oké mkpa.
Otu atụmatụ azụmaahịa na-eleghara itinye anya na ha usoro mgbasa ozi ọha na eze bụ ọrụ ọmịiko ha… na nke ahụ bụ mmeghe. Kwalite ndị ọrụ ebere azụmahịa gị na ndị ọrụ gị na-akwado bụ ụzọ dị mma iji nye karịa karịa akụkụ mmadụ azụmahịa gị, ọ na-enye a na-elekọta akụkụ. Ọzọkwa, ịkwalite ndị ọrụ ebere ị na-arụ ọrụ ga-enyere ndị ọrụ ebere aka - ndị na-anaghị enwekarị akụ na ụba azụmahịa gị!
Anaghị m ekwu maka ịnya isi maka etu azụmahịa gị si arụ ọrụ ebere. Kama, na-atụle ihe omume na otu ndị na - agụ ya na ndị na - eso ụzọ gị nwere ike isi nye aka maka ọrụ ebere. Na ederede ahụ, ọ ga-amasị m iwebata ụkwụ ndị Samaria, otu ọrụ ebere Martech Zone na ụlọ ọrụ m, DK New Media, na-akwado:
Samarkwụ Ndị Sameria bụ nzukọ na-abaghị uru raara nye ịgbanwe ndụ n'agbanyeghị agbanyeghị nkesa Shoes of Hope gburugburu ụwa. Nde mmadu 300 na-eteta kwa ụtụtụ na-enweghị akpụkpọ ụkwụ iji chebe ụkwụ ha pụọ ​​na mmerụ na ọrịa. Ebumnuche nke ụkwụ ndị Sameria bụ inye akpụkpọ ụkwụ Nde mmadụ iri n'ime ndị a n'ime afọ 10 sochirinụ site na ikuziri ha akuko nke okwukwe, olile anya na ihunanya nke Akwukwo Nso, igosiputa eziokwu ndia site n’etu ha aka site n’isa ukwu ha, na ighazota ha akpukpo ukwu na sọks.
Samarkwụ onye Sameria na-aga nke ọma - na-enye n'okpuru 3 nde akpụkpọ ụkwụ abụọ ruo taa!
Martin Luther King, Jr. kwuru, '' Ndụ kacha sie ike ma dịkwa ngwa bụ: kedụ ihe ị na-emere ndị ọzọ? Ka Jenụwarị 18 na-eru nso, anyị nwere olile anya na isoro soro @ tweet4feet na @onyedikachi_ iji kwado ma gbasaa okwu na ọrụ ebere a dị egwu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịde blọgụ maka ụkwụ, m ga-ezitere gị a free akwụkwọ nke eBook nakwa dị ka banyere gị blog post na MLK ụbọchị!
Tags: akpata ahịaọrụ eberemarketingsamaritans ụkwụ
Igodo 5 maka B2B ịde blọgụ
Ihe na-akpata: Charity + Facebook = WIN!